Xidigaha U Sharaxan Xidiga Bisha Ee Horyaalka La Liga Oo Lasoo Saaray Iyo Xidigaha Real Madrid Oo Laga Waayay – Kooxda.com
Home 2017 January Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Xidigaha U Sharaxan Xidiga Bisha Ee Horyaalka La Liga Oo Lasoo Saaray Iyo Xidigaha Real Madrid Oo Laga Waayay
Xidigaha U Sharaxan Xidiga Bisha Ee Horyaalka La Liga Oo Lasoo Saaray Iyo Xidigaha Real Madrid Oo Laga Waayay
Waxaa lasoo saaray xidigaha u sharaxan xidigii ugu wanaagsanaa horyaalka La Liga ee bishii lasoo dhaafay ee sanadkii tagay waxaana xidigahan laga waayay xidig ka socda kooxda horyaalka hogaanka u haysa isla markaana aana hl mar xataa guuldaro dhadhamin ee Real Madrid.
Xidigaha abaal marintan kasoo muuqday waxaa kamid ah saaxirka kooxda Barcelona ee Lionel Messi, Weeraryahanka Sevilla ee Vitolo iyo waliba mashiinka Deportivo ee Andone.
Andone ayaa kooxdiisa Deportivo La Coruna oo kaalinta 15aad kaga jirta kala sareynta horyaalka bishii lasoo dhaafay kasoo dhex muuqday wuxuuna ahaa sida shumac guri madow la dhigay. Xidga wuxuu bishii December sameeyay 3 gool oo nadiif ah iyo 2 gool caawin.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa isagana bishii December wax qabad fiican muujiyay wuxuuna kooxdiisa ka saaciday guulo isaga oo ku lug lahaa goolal door ah. Saaxirka Blaugrana ayaa isagana 3 gool oo saafi ah iyo 2 gool caawin sameeyay si lamid ah Andone.
Waxa aan la isagana waxqabadkiisa la ilaawi karin weeraryahanka koooxda Sevilla nka lagu magacaabo Vitolo kaasi oo sabab u ah in kooxdiisu ay kaalinta labaad kaga jiraan miiska kala sareynta horyaalka La Liga iyaga oo 1 dhibic ka sara karay kooxda Barcelona sidoo kalena 4 dhibic u jira kooxda Real Madrid oo horyaalka hogaaminaysa. Xidiga ayaa isaga 1 gool iyo 1 gool caawin sameeyay bishii lasoo dhaafay.
Sadexda xidig ayaa u sharaxan abaal marinta bilaha ah ee xidigii ugu wanaagsanaa horyaalka La Liga bishii lasoo dhaafay ee sanadkii tagay.
Hadaba akhriste xidigee ayaa u qalma inuu abaal marintan ku guulaysto?